कठिन रियल इस्टेट मार्केटमा मार्केटिंग Martech Zone
आइतबार, डिसेम्बर 21, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
एकको रूपमा अनलाइन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दै मध्यम वाणिज्य को लागी एक बढ्दो कोनाका छ। उपभोक्ताहरू सोशल मिडिया प्रयोगको बारेमा खरीदको निर्णयहरूमा उनीहरूलाई शिक्षित गर्न धेरै चलाख हुँदैछन्।
यहाँ र राष्ट्रिय रूपमा डम्पहरूमा एक आवास बजारको साथ, यो स्वाभाविक एस्टेट एजेन्टहरू र खरीद गर्न खोज्ने उपभोक्ताहरूले भिन्नता ल्याउन इन्टरनेटको उपयोग गर्न सुरु गरेको स्वाभाविकै हो। मैले विगतमा केही घरहरू किनेका थिए र बिक्री गरेको थिएँ र यो राम्रो एजेन्ट पत्ता लगाउनु नै हामीले गरेको उत्तम निर्णय हो भनेर प्रारम्भिक रूपमा महसुस गरें! यसले मेरो परिवारलाई हजारौं डलर बचत गर्‍यो र सबै चीज सहजै साथ सार्‍यो।
डोरफ्लाइ एउटा बजार हो जहाँ प्रतिष्ठित घर जग्गा एजेन्टहरू घर खरीददारहरूसँग काम गर्ने अवसरको लागि बोली दिन्छन्। ग्राहकहरू सफल रेजिष्टर्ड रियल एस्टेट एजेन्टहरू भेट्छन् जसले घर खरीद प्रक्रियामा सहयोग गर्छन् र तिनीहरूलाई छुट दिनुहोस्।
यस पोष्टको माध्यमबाट क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाईं भिडियो देख्नुहुन्न भने कसरी DoorFly काम गर्दछ!
तपाईं यो विचार कसरी ढोका फ्ल्याग ब्लगमा कसरी सफल भयो भन्ने बारे थप पढ्न सक्नुहुन्छ। डोरफ्लाइको बारेमा महान कुरा यो हो कि यसले दुबै घर खरीदकर्ता र घर जग्गा एजेंटलाई कार्य गर्दछ। यस कडा बजारमा, म निश्चित छु कि यी दुई माध्यमहरूलाई जोड्न सक्ने मध्यम उच्च मागमा छ!
मैले गत केही महिनामा डोरफ्लाइ टोलीसँग भेटें र तिनीहरू व्यापार र रियल ईस्टेट उद्योगमा यस अन्तरलाई कम गर्ने अवसरका बारे उत्साहित छन्! म उनीहरूको युवा स्टार्टअप टेक अफ भएको हेर्न चाहन्छु!
इण्डियानापोलिस रियल इस्टेट टेक्नोलोजीको लागि उत्कृष्ट स्टार्टअप बजार देखिन्छ! संगै डोरफ्लाइ, त्यहाँ पनि छ:
URBACS - URBaCS एक वेब-आधारित फोटो अनुप्रयोग हो जुन घरमालिकले उनीहरूको निर्माण अनुभव साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग साझा गर्न प्रयोग गर्दछ।
संयोजी मोबाइल घर जग्गा एसएमएस - एक नवीन नेतृत्व उत्पादन उपकरण जसले दुवै पाठ सन्देश र होस्ट गरिएको टोल फ्री नम्बर दुबै प्रयोग गर्दछ कि घर जानकारी सधैं सम्भावित खरीददारहरु को लागी उपलब्ध छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
प्रत्येक कम्पनी रियल एस्टेट मा एक अलग को लागी सेवा प्रदान गर्दछ तर ती सबै मार्केट प्रदान गर्दछ अद्वितीय समाधान जुन घर बिक्री ड्राइभिंगमा मद्दत गर्दछ!
टैग: स्याउ उत्पादन प्लेसमेन्टफेसबुक ट्याबहरूmboसासएसएमएससामाजिक मिडिया प्रबन्धन प्रणालीवायरफ्रेमिंग उपकरणहरू
मन्दी एक आवश्यक मार्केटिंग रणनीति हो
डिसे 22, 2008 मा 10: 20 AM
निष्पक्ष हुनको लागि - मैले उनीहरूले के प्रस्ताव गर्छन् भनेर हेर्नको लागि डोरफ्लाइ जाँच गरें। अहिले, इन्डियानामा, तिनीहरूसँग6एजेन्टहरू छन् जुन एक खरिदमा बिड गर्दै छन्। खरिदकर्ताले $40,000 को लागि घर किन्न चाहन्छ र उच्चतम बोली $500 हो।, जसको मतलब उच्च बिडिङ एजेन्टले $ 500 छुट दिन वा फिर्ता दिन इच्छुक छ भन्ने अनुमान गर्छु। उनीहरूको आयोगको।
मसँग यो समस्या छ, एजेन्टलाई थाहा छैन कि उसको कमिशन के हुनेछ।
खुलासा: आयोगहरू सेट गरिएका छैनन् र सधैं कुराकानी योग्य छन्।
मैले धेरै बैंक-स्वामित्व भएका घरहरू कमिशनको सेट डलर रकम प्रस्ताव गरेको देखेको छु। यस अवस्थामा, मानौं तिनीहरूले 3% वा $1200.00 प्रस्ताव गर्छन्। हुनसक्छ, तिनीहरूले मात्र $ 1000.00 प्रस्ताव गर्छन्। दुबै अवस्थामा, एजेन्टले कति घण्टा लगानी गर्नेछन् भन्ने थाहा नदिई आफ्नो लगभग आधा कमिसन छोडेका छन्। म विश्वास गर्दिन कि यो समय वा व्यावसायिक विशेषज्ञता को एक बुद्धिमानी लगानी हो।
म ग्यारेन्टी दिनेछु कि राम्रो खरिदकर्ता एजेन्टले उनीहरूको ग्राहकको लागि $ 500 भन्दा राम्रो सम्झौता गर्न सक्छ। $ 50 मा कमीशन वा कमिसनको 300,000% छुट। घर। यो सधैं पैसाको बारेमा होइन - तर सेवा र विशेषज्ञताले अपेक्षा गर्नुपर्छ।
उदाहरण - मैले 3% समापन लागतहरू र त्यसको एक अंश .5% ले ब्याज दर घटाउन प्रयोग गरिन्छ। यस $40,000 घरमा, मैले मेरो क्लाइन्ट $ 200.00 एक वर्षको ब्याजमा बचत गरेको छु।
यहाँ जानको लागि घर जग्गा लेनदेनमा तपाइँको ग्राहकहरूको सर्वोत्तम चासोको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने धेरै उदाहरणहरू छन्, तर मलाई मेरो2सेन्ट अनुमति दिनुभएकोमा धन्यवाद। 🙂
22 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 1:33 बजे
राम्रो प्रतिक्रिया, पाउला!
DoorFly अहिले जमिनबाट बाहिर निस्कनको लागि सीधै काम गरिरहेको छ, त्यहाँका राम्रा मानिसहरूले पूर्ण समय काम गर्दा यो सुरु गरेका छन् - यो धेरै प्रभावशाली छ तर धेरै स्टीम बनाउन केही समय लाग्नेछ।
म एजेन्ट भर्ना गर्ने ठूलो फ्यान हुँ, र यसले बजारमा ल्याउने प्रतिस्पर्धा र छनौट जस्तै। मलाई लाग्दैन कि DoorFly ले यो सबै बिड पक्षमा मार्केटिङ गरिरहेको छ - यो सही घरको लागि सही खरीददारहरूसँग सही एजेन्टहरू जडान गर्ने बारे हो।
मलाई लाग्छ कि यो एक उत्कृष्ट मोडेल हो। यसले उपभोक्ताहरूलाई छनोट र एजेन्टहरूलाई नयाँ खरीददारहरूसँग जडान गर्नको लागि माध्यम प्रदान गर्दछ - आजकल केही दुर्लभ!
शुभ बिदा र तपाइँको इनपुट को लागी धन्यवाद!
डिसे 23, 2008 मा 12: 45 AM
लिङ्क प्रेम को लागी धन्यवाद। हामी 2009 को बारेमा उत्साहित छौं किनभने हामीले अन्ततः घर निर्माणकर्ताहरूलाई सोशल मिडिया क्षेत्रमा पाइला चालेको देखिरहेका छौं। धेरै निर्माणकर्ताहरूले फेसबुक र फ्लिकर जस्ता साइटहरू ब्लग गर्न, ट्वीट गर्न र प्रयोग गर्न थालेका छन्। यद्यपि 2009 नयाँ घर बिक्रीको सन्दर्भमा प्रायः सुस्त हुनेछ, हामी निर्माणकर्ताहरूले नयाँ मिडियामा पुग्न जारी देख्ने आशा गर्छौं।